မန္တလေး - မြန်မာ | မြန်မာသွားရောက်ကြည့်ရှု
ဧရာဝတီမြစ်၏အရှေ့ဖက်ကမ်းတွင်အလတ်စား (ယခင်ကဧရာဝတီမြစ်) မန္တလေးမြန်မာနိုင်ငံတွင်ဒုတိယအကြီးဆုံးမြို့ဖြစ်၏ (မြန်မာနိုင်ငံ) ရန်ကုန်အပြီး, ပတ်ပတ်လည်တစ် polulation နှင့်အတူ 1.5 သန်း.
ခရီးသွားဧည့်များ၏တစ်ဦးကအများကြီးနေ့ကခရီးစဉ်ပတျဝနျးကငျြမြင်ကွင်းများအပေါငျးတို့သကြည့်ဖို့အတှကျအခြေစိုက်စခန်းအဖြစ်မန္တလေးကိုသုံးပါ. သငျသညျမန္တလေးသွားရောက်ကြည့်ရှုတဲ့အခါမှာတွေ့ကြုံခံစားဖို့မြင်ကွင်းများတော်ဝင်နန်းတော်ပါဝင်သည်, မန္တလေးတောင်, ဦးပိန်တံတား, သစ်သားနှင့်စိုက်ပျိုးရေးဆိုင်များ, ရွှေအရွက်စျေးဆိုင်အောင်, အဆိုပါကျောက်စိမ်း & ကျောက်မျက်စျေးကွက်, ပိုးယက်လုပ်ခြင်းဆိုင်များ, ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ဘုရားကျောင်းတစ်အိမ်ရှင် & ဘုရားပုထိုးစေတီ, Bhuddist Monastries, အဆိုပါ Zegyo Market က, မြောက်မြားစွာဒေသခံလမ်းနှင့်ညဉ့်စျေးကွက်, လမ်းပေါ်အစားအစာငျးကုနှင့်ဒေသခံစားသောက်ဆိုင်, မြန်မာချက်ပြုတ်ကျောင်းများ, ရိုးရာရုပ်သေးရုပ်ရှင်ရုံနှင့်အခြားဆွဲဆောင်မှု. အဖြစ်ကောင်းစွာဒီအားလုံးမြင်နေသကဲ့သို့သင်တို့ထို့နောက်အမရပူရတူသောအဆင်းလှရှေးဟောင်းသုတေသနက်ဘ်ဆိုက်များမှတစ်နေ့လျှင်ခရီးစဉ်ယူနိုင်ပါသည်, အင်း (အင်း), စစ်ကိုင်းနှင့်မင်းကွန်း.
မန္တလေးရတဲ့၏အမျိုးမျိုးသောနည်းလမ်းတွေရှိပါတယ်. ရန်ကုန်ကနေတစ်ခုသာ 1hr ဖြစ်ပါသည် 20 မိနစ်ပျံသန်း, သို့မဟုတ် 1 နာရီ 50 ဘန်ကောက်မြို့ကနေမိနစ်ပျံသန်း. ကျွန်တော်တို့ရဲ့နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များအဘို့မန္တလေးစာမျက်နှာရန်ရယူခြင်းကိုကြည့်ပါ.
မန္တလေးကနေမြန်မာနိုင်ငံ၏မြို့တော်ဖြစ်ခဲ့သည် 1855 သို့ 1885 နှင့်မြန်မာနိုင်ငံ၏နောက်ဆုံးတော်ဝင်နန်းတော်ရဲ့မူလနေရာဖြစ်သည်. မတိုင်မီကမြန်မာတော်ဝင်စာလုံးကိုပြန်မယ့် 850 အေဒီပုဂံပါဝင်သည် (ထို့နောက်ပုဂံကိုခေါ်) နှင့်စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၏အနီးအနားမြို့ရွာ, အင်း (အင်း) နှင့်အမရပူရ.
တွင် 1885 မန္တလေးအိန္ဒိယမှတော်ဝင်မိသားစုပြည်ပရောက်နှင့်၎င်း၏ဘုန်းကြီးသော aftifacts ၏တော်ဝင်နန်းတော်ကိုချွတ်သောသူသည်ဗြိတိသျှတို့ကကျူးကျော်ခဲ့သည်. ရန်ကုန် (ရန်ကုန်မြိ့ု) ထို့နောက်အဆိုပါမြို့တော်ဖြစ်ခဲ့သည်. မြန်မာနိုင်ငံသည်ဗြိတိသျှတို့အတွက်ထံမှလွတ်လပ်ရေးရရှိခဲ့ချိန် မှစ. 1948 မန္တလေးမြန်မာယဉ်ကျေးမှုစင်တာဖြစ်လာဖို့စိုက်ပျိုးထားပါတယ်.
တမြို့လုံး၏ဗဟိုက၎င်း၏ဝိုငျး 8km ရှည်လျား 60 ကျယ်ပြန့်ကျုံးနှင့်အတူတော်ဝင်နန်းတော်ကလွှမ်းမိုးနေသည်. မြို့အသစ်များအစိတ်အပိုင်းများနန်းတော်တဝိုက်ပေမယ့်အများအားဖြင့်ပြုလုပ်၏တောင်ဘက်မှတက်စိုက်ပျိုးခဲ့ကြ. တော်ဝင်နန်းတော်နှင့်ဘုရားကျောင်းအများကြီးသွားရောက်, ဘုရားပုထိုးစေတီနှင့်မန္တလေးနှင့်အနီးတဝိုက်ရှေးခေတ်က်ဘ်ဆိုက်များသင်တို့အဘို့အကာရှေးဟောင်းသုတေသနဇုန်လက်မှတ်ဝယ်ယူရန်လိုအပ်ပါလိမ့်မည် 10,000 ကျပ်ငွေ - $10. အဆိုပါလက်မှတ်များအတွက်တရားဝင်သည် 1 ရက်သတ္တပတ်. အဆိုပါဘုရားကျောင်းနှင့်ဘုရားပုထိုးစေတီများအနည်းငယ်မှာသင်ကလည်းလက်ရှိ 1,000K ပေးဆောင်ရပါလိမ့်မယ် – $1 ကင်မရာကြေး. ဒီနေဖြင့်တိုးမြှင့်စေခြင်းငှါကောလာဟလများရှိပါတယ် 2018 တစ်ခုခုမှ2သို့မဟုတ် 3,000K.
(အဖျား – မန္တလေးတော်ဝင်နန်းတော်မှာ start နှင့်ထိုအရပ်၌ရှေးဟောင်းသုတေသနဇုန်လက်မှတ်ဝယ်ဖို့. သင်ကသင်သွားရောက်သောနေရာများအချို့မှာတံဆိပ်ထုဖို့ကထဲကယူရပါလိမ့်မယ်အဖြစ်သင့်ပိုက်ဆံအိတ်ထဲမှာနေရာလေးကိုကထားပါ။)
နန်းတော့်မြောက်မန္တလေးတောင်ဖြစ်ပါသည်, တစ်ဦးအများအားဖြင့်အပြားရှုခင်းအတွက်အမြင့်မားဆုံးအစက်အပြောက်. သငျသညျထိပ်ရှည်လှေကားတက်လမ်းလျှောက်သို့မဟုတ်အပေါင်းတို့သည်လမ်းထိပ်ဖို့လမျးခရီးကိုတက်စီးနိုင်ပါတယ်ဖြစ်စေ. အဲဒီမှာတက်ရာမှကြောက်စရာကောင်းတဲ့အမြင်များ.
မန္တလေးသူ့ဟာသူန်းကျင်ရတဲ့အတှကျအသငျသညျအမြိုးမြိုးကိုရှေးခယျြစရာရှိတယ်. အဆိုပါမြို့သူ့ဟာသူပြားပေမယ့်ဝေးလွန်းအားလုံးပတ်လည်လမ်းလျှောက်ထွက်ပျံ့နှံ့. အကောင်းဆုံးရွေးချယ်စရာ bicyle များမှာ, မော်တော်ဆိုင်ကယ် (မော်တော်ဆိုင်ကယ်) သို့မဟုတ်ကားတက္ကစီ. ကနေစက်ဘီး $1 သို့ $5 တစ်နေ့လျှင်, မော်တော်ဆိုင်ကယ်ကိုယ့်ကိုကိုယ်စီး $10 သို့ $25 တစ်နေ့တာပေါင်းလောင်စာနှုန်း, မော်တော်ဆိုင်ကယ်တက္ကစီ (တဦးတည်းခရီးသည်) $10 သို့ $15 နေ့နှင့်ကားတစ်စီးတက္ကစီနှုန်း (3-5 ခရီးသည်) $25 သို့ $35 တစ်နေ့လျှင်. တနည်းအားဖြင့်တစ်ဦးဧည့်လမ်းညွှန်ကိုငှားရမ်းကြပြီးမန္တလေး၏ဘုန်းအာနုဘော်ကိုမြင်လှည့်ပတ်သငျသညျယူပါလိမ့်မယ်. ကျွန်တော်တို့ရဲ့နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များအဘို့မန္တလေးစာမျက်နှာခန့်ရယူခြင်းကိုကြည့်ပါ.
အကြံပြုမန္တလေးခရီးစဉ်လမ်းညွှန် (အင်္ဂလိပ်စကားပြော, ဖော်ရွေ, ယုံကြည်စိတ်ချရသောနှင့်စီးပွားရေးအရ)
မစ္စတာ. ကျော်နိုင်ဝင်း (ဦးကျော်)
လူအုပ်စု (+95) 92 5904 7426 – အီးမေးလ်က – kyawnaing2110@gmail.com
အကြံပြုကားတက္ကစီ (ဖော်ရွေ, ယုံကြည်စိတ်ချရသောနှင့်စီးပွားရေးအရ)
လူအုပ်စု (+95) 92 5911 7141